Doorashada Soomaaliya: tirinta codadka wareegga labaad oo billaabatay - BBC Somali
Image caption Qaar ka mid ah xildhibaanada maatna dooran doona hogaanka Soomaaliya
Xildhibaanada Soomaaliya ayaa billaabay codeynta doorashada madaxtinimada oo dhowr jeery horay dib loogu dhigay. 328 xildhibaan oo ka kooban Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ayaa ku sugan hoolka codeynta.
Gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa sheegay in hal xildhibaan oo xanuusan uu maqan yahay.
Kuwa ku lugta leh codeynta waxay qabaan kalsooni, iyagoo ku macneeyey talaabo muhiim ah oo horey loo qaaday waddan in muddo ah deganaansho la'aan ahaa kaas oo ku jira liiska madaxweyne Donald Trump ee xayiraadda safarka todobo waddan oo dadkoodu u badan yihiin Muslimiin.
"Dhamaanteen si wanaagsan ayaan ugu diyaarsannahay doorashada madaxweynaha cusub, waa tijaabo dimuqraadiyad curdan ah" sidaa waxaa yiri Axmed Cali oo ah xildhibaan.
Dhowr hoobiyayaal ayaa laga maqlay qeybo ka mid ah caasimadda xalay.
Madaxweynaha xilka haya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu raadinayaa in dib loo doorto, laakiin musharaxiinta ka soo horjeeda oo uu ku jira ra'isalwasaaraha Cumar cabdirashiid ayaa ku eedeeyey wadamadda dariska ah inay faragalin ku hayaan hannaanka doorashadda iyagoo garab siinaya musharaxiin gaar ah.
``Wadamadda dariska ah waa inay dhawraan madaxbannaanideenna aynna joojiyaan faraha ay kula jitaan arrimaheenna" ayuu yiri Ra'isalwasaaruhu isagoon magacaabin dalalkaas.
Inkastoo Matt Bryden, agaasimaha hay'adda cilmibaarista ee Sahan ahna qabiir siyaasadda Soomaaliya annu rumaysnayn in hannaanka doorashadu uu noqon karo xor iyo xalaal, haddana wuxuu sheegay in uu yahay mid ka fiican arrimo kale.
``Way jiraan warar lagu kalsoon karo, waxaa qabaa in si fiican loo taaban karo eedeymaha musuqmaasuq, cagajugleyn, xadgudub. Laakiin aasaasiyan weli waa talaabo hor-u-socod ah" ayuu yiri Bryden
Waxaa kale oo uu yiri "Jid kale wuxuu ahaan lahaa inaan la helin isbadal guud ahaan, xalaadaas oo Soomaaliya dib ugu celin lahayd burbur, sidaad darteed ma ahan wax qurxoon, Laakiin tan [Doorashada] talaabo loo qaaday jihada saxda ah waana laga yaabaa inay tahay sida ugu fiican ee aan rajeynaynno heerkan".
Heerka kala iibsiga codadka, musuqmaasuqa iyo caga-jugleynta waa walaaca haysta wadan hay'adda caalamiga ah ee hufnaanta ay ku qiimaysay kan ugu musuqa badan aduunka.
Image caption Madaxweynaha waxaa dooranyo xubnaha Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka
Rabshado, cagojugleyn iyo laaluush ayaa harreeyey qorshaha sida uu sheegay hawlgalka Qaramada Midoobay oo sidoo kale cambaareeyey go'aanka ah in musharaxiinta la eedeeyey aan lagala noqon xubinnimadda.
Si loo xaqiijiyo doorashada Arbacda inay qabsoonto kumannaan ciidan ah ayaa lagu daadiyey wadooyinka Muqdisho , waxaa la xannibay gaadiidka wadooyinka waa wayn taas oo loola dan leeyahay in lagu dhimo qatar weerraro ay gayustaan kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Al-Shabaab, kuwaasi oo ku hanjabay inay carqaladayn doonnaan doorashada.
"Dabcan waan fahamsanahay sida xaaladdahan adkeynta amaanka ay u saameeynayaan nolasha dadka, Balse ma dhuminaynno fursadaha xaqiijinta amniga doorashada" ayuu yiri Cali Maxmauud oo ah Korneyl ka tirsan Booliiska oo taagnaa bar ciidan iyadoo ciidamaddu baarayaan gawaarida iyo rakaabka.
Natiijada doorashada waxaa lagu wadaa in la shaaciyo isla maanta.